Iràka: “Soa ihany fa tsy Baomba tanaty Fiara!” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2019 17:08 GMT
Rehefa avy niala sasatra kely aho, tsy misy tsara mihoatra nóho ny fanomezako ireo mpamaky izay tena tiany ho vakiana -teny avy any an-dalamben'i Bagdad sy Mosul. Ary tsy misy fotoana tsara nóho ity satria niverina nanoratra bilaogy avy ao Bagdad i Chikitita, manome ny fomba fijeriny ny tanàna iray izay nilaozany tanatin'ny volana maro. Ary i Neurotic Wife, mandehandeha manerana ny ‘faritra mena‘. I Baghdad Dentist koa miverina ao Mosul rehefa avy niala sasatra tao Bagdad ary mitantara amintsika ireo fasamihafana.
Gara Afovoany ao Bagdad nalain'i Neurotic Wife
Milaza ny olona fa ieren-doza kokoa i Bagdad – saika efa niverina tamin'ny laoniny. Ary marina izany amin'ny lafiny iray, kanefa miankina amin'ny fomba fijery izany ary arakaraka ny tsirairay avokoa. Niverina ao Iràka i Chikitita, mitsidika ny trano fonenany. Manoratra izy:
Nahatsapa fandrosoana kely aho teny amin'ny manodidina; fiara mizotra amin'ny faritra iray feno ny Al Qaida taloha ho any aminà faritra iray hafa mbola eo ambany fifehezan'ny Badr. Tsy fandre mihitsy izany fony izaho mbola teto an-tanindrazana! Talanjona tamin'ireo fiovana vaovao aho; manana voninkazo tsy tena izy mipetapetaka avokoa ireo toeram-pisavana rehetra toy ny hoe hanodinana ny fijerin'ireo mpandinika hiala amin'ny fanamiana sy ny basy ka ho any amin'ny fahitàna fa tsy hanao ratsy azy ireo tanora miaramila ireo.
… Araka ny nampanantenaina ahy, … fitsangatsanganana an-tsambo manerana ny Tigris. NAHAZENDANA izany! Voalohany izao teo amin'ny androm-piainako no nahafahako naka sary tanatin'ny tanànako, na dia teny ambony sambo aza, sary mihiaka hoe TATY BAGDAD AHO!
Tao amin'ilay toerana tiako indrindra tao amin'ny tsenan'i Kadhimiya no nijanonana farany, izay toa avotra. Tsy nisy fametsifetsena, toa feno aina ireo endrika mirana sy ny fanahy Ntaolo tsara Irakiana.
Mosken'i Saddam ao Mansour (mbola mijoro) nalain'i Neurotic Wife
Saingy andro vitsy taty aoriana, nitefoka taminy ny zavamisy:
Toa nahita ny volana alohan'Ibiby aho tanatin'ny lahatsoratro teo aloha. Nisy mpandeha iray, izay zara raha nahavita naka aina sy nijery ny patalohany raha nisy diam-bovoka, nilaza fa vintana no tsy nahafaty azy taminà daroka baomba… namakivaky ny tanànan'ny fahazazako mihitsy ny IED. Ny nahafanina ahy tamin'ity tanora mpandeha ity dia ilay izy nitsiky raha nihazakazaka nanenjika fiara fitateram-bahoaka, sy ilay teniny nampihomehy “soa ihany fa tsy baomba tanaty fiara ilay izy!” Akory izany vintantsika!
Miala ny Faritra Maitso mba hanao fitetezana tsy fahita firy an’ireo araben'i Bagdad i Neurotic Wife ary mivoaka misakafo anatinà trano fisakafoana ao an-toerana. Milaza izy:
Hipoka tanteraka ilay toerana. Nivoaka sy niditra ny olona satria tsy nisy toerana malalaka intsony. Nijery ireo olona aho, faly ry zareo. Tovovavy miakanjo manaraka ny hika farany miaraka amin'ny ankosotra fatao amin'ny tarehy, solomaso manara-damaody fentina amin'ny masoandro miantona eo ambonin'ny lohany, miaro ny volo amin'ny masony ary kavina lehibe mitarozaroza amin'ny sofiny. Toa marevaka avokoa ny manodidina ahy, na olona na zavatra, misy aina tanteraka. Ary ambonin'izay rehetra izay, toa toy ny MAHAZATRA!!!
Nisy nanosika ahy hamoaka ny kamera-ko sy haka sary an-jatonjatony. Tiako ho hitan'izao tontolo izao fa na inona mitranga ao Iràka, ireo balafomanga, daroka baomba, vono olona, fakàna an-keriny, mbola Misy Mandrakariva ny Aina. MANDRAKARIVA.
Trano fivarotana vitsivitsy ao Bagdad nalain'i Neurotic Wife
Iray amin'ireo anton'ireo tatitra mamirapiratra momba ny fandriampahalemana ao Bagdad angamba ny nofinofin'ny mponiny. I Chikitita, izay nahita ny tontolo ivelan'i Bagdad, mijery ny fanantenan'ny namany amin'ny endriny vaovao. Manoratra izy:
Nitsahatra nijery ireo lafitsaran'i Iràka aho ary namoy ny fanantenana amin'ilay fiovàna tsara, saingy [ny namako] kosa tsia. Narisika tokoa izy nampiseho tamiko ny fiainana araka ny fahitan'ny masony azy, izay zavatra rehetra afaka nanome ahy fahatsapana sarintsariny ny fandriampahalemana sy ny fiaraha-miaina. Tsy nahomby izany. Marina ilay teniny fa mbola nisokatra aorian'ny amin'ny 5 ora hariva ireo tranombarotra, kanefa mihidy amin'ny 7 ora hariva kosa, tsy hitako izay fivoarana tamin'izany… mbola arovana amin'ny fefy tariby ireo moske, porofon'ny tsy fahatokiana mbola mitoetra. Reko fa mifanome fanevatevàna ara-pinoana ireo mpandeha fitaovam-pitaterana, fambara ratsy ihany koa, ary ny reniny izao mihitsy aza no nitantara tamiko ny momba ny fianarana iray tsy miankina tsy lavitra teo izay natao ho an'ny zazavavy, naharay fandrahonana avy amin'ireo milisy handraoka ireo lehilahy mpampianatra mahay raha tsy izany apoakan-dry zareo ny toeram-pianarana iray manontolo.
Ary i Mosul
Miverina ao Mosul i Baghdad Dentistem rehefa avy niala sasatra an-tanindrazana tao Bagdad. Manome sarim-piainana ho an'ilay tanora mpitovo miasa ao amin'io tanàna io izy:
mampidi-doza loatra ny miaina an-tanindrazako satria rehefa mahita lehilahy tanora mipetra-drery ireo mpiambina nasionaly na ireo tafika amerikana dia raisin-dry zareo ho mpampihorohoro izy ka hotànana. … natahotra ireo mpiray vodirindrina [amiko], niahotra niresaka momba ny toejavatra niainako, ary tsy nanome valinteny mazava tamiko. …
nihaona tamin'ireo namako nahamanimanina ahy aho ary tany ireo mpanao nify mpandimby… ny alina, nihomehy sy nitafatafa zahay ary fipoahana 3 sy tifitifitra vitsivitsy no hira fampatoriana. … Ny Zoma, fipoahana mampivarahontsana no fanairana nanaitra anay tamin'nytorimaso ary nifampijery izahay raha toa ka nisy naratra.
Na ireo anjerimanontolo sy ny mpianatra aza dia tsy afaka mandositra io herisetra io. Manoratra i Aunt Najma:
Henjana ny toedraharaha androany, nisy fikasàna hamono ny tale lefitra ao amin'ny anjerimanontolo, ary maro ireo fepetra fiarovana anatiny.
Fantatra androany fa nisy mpiara-mianatra taminay, M, voatifitra andro vitsy lasa izay. Nilaza ry zareo fa voatifitra teo amin'ny tongony izy ary tsy maninona. Tohina aho nahare ireo vaovao, tsy nisy niteny taminay, ohatra ny hoe tsy nisy niraharahianay izany.
Kilalao anaty varavarankelinà toeram-pivarotana iray nalain'i Neurotic Wife
Na dia tafaraikitra ao an-trano aza ianao, nahita fomba hitsidihana izao tontolo izao avy eo ambony sezany ao Bagdad i Marshmallow26:
Eny, nipetraka teo ambony seza aho, nankafy ny tsiron'ny paoma menako. Voatsidiko i Aostria – Pfaenderhang, Japana, ny fivarotana entana fahagola tao Eoropa, ny tranombarotra lehibe amin'ny alina, ary ny kianjan-tanàna iray tsy haiko akory hoe aiza…
Azo atao avokoa ny zava-drehetra rehefa momba ny fikarohana ao amin'ny Google, namaky ny iray amin'ireo vohikala momba ny teknolojia aho, ary nahita teny fitaka, mantra soratanao anatin'ny faritra fikarohan'ny Google dia mahazo ireo kamera mivantana rehetra manerana izao tontolo izao ianao…inty ilay teny: liveapplet.
Afaka mahita ireo seranam-piaramanidina, ireo fiaran-dalamby ambanin'ny tany, ny Times Square ao New York, ireo orinasa famokarana, ireo valam-biby ianao, ary mahazo sary!
Na dia mbola tsy nisidina tanaty fiaramanidina aza ny tenako, na koa nahita firenena hafa ankoatra an'i Syria, tsapako ho toa nandeha tany amin'ireo toerana rehetra izay nokarohiko tamin'ny alàlan'ny Google ireo aho…Efa teneniko foana ity, TIAKO NY TEKNOLOJIA.